Ciyaartoyda Spain Oo Shaqo Joojin Ku Dhawaaqay Labada Todobaad Ee Ugu Horeysay La Liga | WWW.DARARWEYNE.TK
Ciyaartoyda Spain Oo Shaqo Joojin Ku Dhawaaqay Labada Todobaad Ee Ugu Horeysay La Liga
Xiriirka ciyaartoyda Spanishka ee AFE ayaa ku dhawaaqay inay ciyaartoyda heerka koowaad iyo kuwa heerka labaad sameyn doonaan shaqo joojin labada todobaad ee ugu horeysay horyaalka cusub ee 2011-12.
Ciyaartoyda ayaa doonaya in mushaharkooda meel loo saaro hadii kooxaha ay dhaqaalo darro soo wajahdo, mana ciyaari doonaan ilaa heshiis ay gaaraan AFE iyo kooxaha Spain.
“Waa isku raacsanahay go’aankeena, waxaana ku dhawaaqeynaa shaqo joojin” ayuu madaxweynaha AFE Luis Rubiales ku sheegay shir jaraa’id, si ay ku warantay Marca.
“Dhamaan ciyaartoyda La Liga ee heerka kowaad iyo heerka labaad waa ay taageersan yihiin go’aankan. Tartamadan ma bilaaban doonaan ilaa heshiis ay gaaraan xiriirka horyaalka Spain iyo ciyaartoyda” ayuu hadalkiisa raaciyay.
“Waxaan ka danbeynaa dhamaan dalalka ee yurub marka ay timaado arintan. Ma weydisaneyno lacag badan, lakiin waxaan rabnaa in qandaraasyada la ixtiraamo. Ciyaartoyda oo dhan waxa ay u qalmaan in isku si loola macaamilo kooxdii ay doonaan ha u ciyaaraane”
Dhowr kooxood oo Spain ah ayaa dhaqaale darro ku jira, waxaana ay ku dhibtoonayeen inay mushaharka buuxa siiyaan ciyaartoydooda sanadihii u danbeeyay.
Real Mallorca ayaa loo diiday inay ciyaarto Europa League xilli ciyaareedkii hore dhaqaale darro heysa darteed, halka Hercules ay iyadana mar saarneyd saxaafada ka dib markii Royston Drenthe uu shaqo joojin sameeyay markii uu mushaharkiisa heli waayay lixdii bilood ee ugu horeysay ee uu kooxda joogay.
Dhinaca kale dalka Talyaaniga ayaa isagana laga cabsi qabaa in horyaalkiisa dib u dhaco, iyadoo xiriirka ciyaartoyda Italy ay ku hanjabeen inay shaqo joojin sameyn doonaan ciyaartoyda hadii aan la sixiixin heshiiska xuquuqda ciyaartoyda ee xiriirka Lega Calcio.
« Liverpool Iyo Newcastle United Oo Si Rasmi Ah Uga Heshiiyay Saxiixa Ciyaaryahan Jose Enrique
Funaanada labaad ee ay kuciyaari doonto realmadrid oo lasoo saarey + Sawiro »